Ndinotenda kuti iwe wakatevera iwo inonakidza Iyo FOSS dhairekisi yekuisa Arch Linux. Iyo gwara inopera nematanho ataura maitiro ekuisa iyo GNOME desktop.
Zvino, havasi vese munhu anofarira GNOME fan uye vanoverenga vakati wandei kuti tivaratidze maitiro ekugadzirisa iwo KDE desktop on Arch Linux.
Uye nekudaro ini ndakagadzira chinyorwa ichi kuratidza matanho ekunyatsoisa nekumisikidza KDE desktop (inozivikanwawo seKDE Plasma desktop) paArch Linux.
Maitiro ekuisa uye kuseta KDE desktop yemhepo pane Arch Linux
Ndapota ramba uchifunga kuti KDE haibvumiri login semuti zvakananga. Kana iwe waisa Arch Linux uye uchishandisa iyo midzi, unofanirwa kugadzira mushandisi mutsva woipa iyo sudo kodzero yekumhanya mirairo seidzi midzi.
Kana iwe uchingova neisina akaisirwa zvishoma kuisirwa Arch Linux, iwe ungangove kupinda muTTY terminal. Kana iwe uri kushandisa imwe imwe desktop desktop, matanho anoramba akafanana.
Nhanho 1: Gadzira mushandisi sudo (kana uine chete mushandisi)
Unogona kushandisa useradd raira yekugadzira mushandisi mutsva. Ndiri kugadzira mushandisi anonzi dimitrios (ndiro zita rangu). Unogona kushandisa chimwe chinhu chinoenderana nezita rako.
Iyo sarudzo -m inogadzira dhairekitori repamba kune mushandisi achangogadzirwa.
Iwe unofanirwa zvakare kusevha password yemushandisi uyu. Shandisa uyu murairo:
Zvino zvawagadzira mushandisi, ipa sudo yekuwana. Kutanga, gadza sudo uye a command line text editor se nano:
Faira yekugadziriswa kweiyo sudo ndeye / etc / sudoers. Inofanira kugara yakarongedzwa pamwe nechero vhodo. visudo inokiya iyo sudoers faira, inochengetera kushandurwa kune faira rekare, uye inotarisa iyo faira nyowani isati yatevedzera ku / etc / sudoers.
Kuti ushandise nano semufananidzo we visudo, shandisa:
Wedzera mutsara unotevera sezvandinoita mumuenzaniso, wobva chengetedza uye kubuda.
Kuwedzera Sudoer muArch Linux
Sevha shanduko dzako uye ubudise mupepeti. Iwe ikozvino une sudo mushandisi paArch Linux.
Nhanho yechipiri: Kuisa KDE Plasma desktop
Kuti umhanye KDE desktop, unoda mapakeji anotevera:
Wayland musangano weKDE Plasma
KDE zvikumbiro boka (rine maKDE akanangana nemashandisirwo anosanganisira maneja weDolphin nezvimwe zvinoshanda)
Iwe unogona kuisa pane zviri pamusoro uchishandisa unotevera rairo:
Kana yaiswa, gonesa iyo Display Manager uye Network Manager services:
Pamwe ipapo. Shutdown system yako:
Simba pane yako system uye iwe unofanirwa kuona iyo KDE login. Iwe unorangarira here password yawakagadza kune yako sudo mushandisi? Shandisa iyo kupinda.
Ungangoda kuongorora izvo zvakakosha pacman inoraira, kuziva zviri kuitika ne Arch User Repository uye dzidza zvakawanda nezve AUR vabatsiri.
Ndinovimba wakawana dzidzo iyi inobatsira kuisa KDE desktop pane Arch Linux. Ndokumbirawo mutizivise mune zvakataurwa pazasi, kana iwe wakasangana nechero chipingamupinyi kana kuomesa panguva yekuisirwa.
Ndeipi yako yaunoda Desktop nharaunda kana Window Manager?
Chinyorwa cheGNU / Linux Distros ne KDE Plasma 5.10 + Maitiro Ekuvandudza
KDE Plasma 5.18 LTS Yakabudiswa Iine Zvinhu Zvitsva
Muchidimbu Pakati peKDE Plasma 5.18 LTS uye GNOME 3.36 Gresik
Ipfupi KDE Plasma 5.9 Ongororo muna Kukadzi 2017
KDE vs GNOME: Chii Chekupedzisira Linux Desktop Sarudzo?
7 Zvinokosha Zvinhu Zvekuita Mushure mekuisa Arch Linux
Maitiro ekuisa Arch Linux pane Raspberry Pi 4 [Nhanho-nhanho Kudzidzisa kweVatangi]
KDE Customization Nhungamiro: Hedzinoi 11 Nzira dzaunogona Kuchinja Kutaridzika uye Kunzwa kweKDE-Yakapihwa Linux Desktop
Nzira yekugadzira Arch Linux [Nhanho Nhanho Nhungamiro]
KDE Plasma 5.16 Inobudisa Its 'Cool' Mifananidzo Yatsva